एस.एम.एस. प्रणाली चितवनमा प्रभावकारी – Saurahaonline.com
एस.एम.एस. प्रणाली चितवनमा प्रभावकारी
सौराहा अनलाइन | २०७४, १५ बैशाख शुक्रबार
चितवन, १५ बैशाख । डढेलो नियन्त्रणका लागि इसिमोडले सञ्चालन गरेको एस.एम.एस. प्रणाली चितवनमा प्रभावकारी देखिएको छ । वनमा डढेलो नै लाग्न नपाओस भन्ने उदेश्य रहेको जिल्ला वन कार्यालय चितवनले जनाएको छ । इसिमोडले सञ्चालन गरेको एस.एम.एस. प्रणालीले डढेलो लागेको ठाउंको अक्षांश र देशान्तर दुरी सहितको तथ्यांक दिएर मोबाइलमा एस.एम.एस. पठाउने गर्दछ । एकदमै सानो आगोको झिल्कोको जानकारी पनि मोबाइलमा एस.एम.एस. प्राप्त हुने जिल्ला वन कार्यालयका सुचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बन जंगल संरक्षण्का लागि यो प्रणालीले सुचना प्रवाह गरेर एकदमै महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको वताइएको छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि बन जंगल संरक्षणमा खटिने जिल्ला वन कार्यालय, सामुदायिक वन महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुको मोबाइलमा एस.एम.एस. आउने उनले वताए । एस.एम.एस. प्राप्त हुना साथ सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी एवं स्थानियको सहयोगमा डढेलो नियन्त्रणमा लिइने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि अहिले चितवनका वनहरुमा डढेलोको समस्या नरहेको उनले जानकारी दिए । समय समयमा बर्षा हुंदा जमिन सुख्खा हुन नपाएको उनको भनाइ छ । पिकनिक खाने समुहले बालेको एकदमै सानो आगोको समेत एस.एम.एस. मार्फत जानकारी आउने भन्दै उनले डढेलो लागेको ठाउंमा नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको वताए । चितवनमा वनका १० ओटा इलाका र २ ओटा सेक्टर र ८७ ओटा सामुदायिक बनहरु रहेका छन् ।